Ciidanka XDS iyo kuwa AMISOM oo howlgallo ka wada deegaanno ka tirsan degmada Ceelbuur – Radio Muqdisho
Ciidanka XDS iyo kuwa AMISOM oo howlgallo ka wada deegaanno ka tirsan degmada Ceelbuur
Ciidanka XDS iyo kuwa AMISOM ayaa howlgallo baaxad leh ka wada, deegaano hoos taga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Howlgalladan ayeey ciidamadu ka fulinayaan deeganno gaar ah oo ay ku dhuumaaleeysanayeen maleeshiyaadka Shabaab, waxeyna ciidamadu gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro la rumeeysanyahay ineey ka tirsanyihiin maleeshiyaadka nabad diidka ah.
Saraakiil ka tirsan qeybta 21-aad ee ciidanka XDS ayaa Radio Muqdisho u sheegay in howlgalkani uu sii socon doono tan iyo inta kooxaha argagixisada laga sifeeynayo gobolkaasi oo dhan.
Taliska qeybta 21-aad ee ciidanka XDS oo gacan ka helaya ciidanka AMISOM ayaa qorsheeynaya ineey dhawaan gaaraan degmooyinka ka harsan gobolka sida Ceeldheer, Galcad iyo Galhareeri.
Howlgalkani ayaa imaanaya iyadoo maleeshiyaadka Shabaab ay sii kordhiyeen cadaadiska ay ku hayaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaannada ay weli kaga harsanyihiin gobolka Galgaduud.
Daawo Barnaamij Xiiso badan oo ka hadlaya qaabka shabaab weerarada u fuliyaan iyo sida loo fashiliyay hagar-daamadoodii